प्रेम पत्र समातोर गालि दिए –अभिनेत्री निशा-CineHotline.com
अभिनेत्री निशा कार्की नामले भन्दा पनि कामको परिचयले चिनिन्छिन् । मण्डला नाटकघरको तेस्रो ब्याचकी उनले ‘सिरुमा रानी’ नाटकबाट आफ्नो परिचय कोर्न सफल भइन् । त्यसपछि उनले मण्डालाकै केही नाटक अभिनय गरिन् तर ‘सिरुमा रानी’को उनको परिचय कुनैले फेर्न सकेन । गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘सायद २’मा पनि उनी नायिकाको रुपमा देखिएकी छन् । एकदम बब्ली, रमाइलो गर्नुपर्ने र आफ्नो ब्वाइफ्रेन्डलाई धेरै भन्दा धेरै विश्वास गर्ने ‘बब्ली’ नामक केटीको भूमिकामा उनले चलचित्रमा निर्बाह गरेकी छिन् । चलचित्रले ब्यवसाहिक सफलता नपाए पनि उनले भने अभिनयबाट चर्चा पाउन सफल भइन् । चलचित्रमा अमृत ढुंगाना उनका जोडी बनेका थिए । दुबैको अभिनय चलचित्रको राम्रोसँग पाटो समेत बन्यो । थिएटर अभिनयमा निखारिदै गरेकी निशा चलचित्र अभिनयले प्रबिधि बुझ्न मद्दत गरेको बताउछिन् । यि नै निशासँग दश प्रश्न ।
तपाईको डेब्यु चलचित्र गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको छ । प्रतिक्रिया कस्तो आइरहेको छ ?
–साथीभाई आफन्त लगायत मलाई चिन्ने सबैले राम्रो अभिनय गरेको रहेछ । राम्रो लाग्यो । अझै राम्रो गर्नुपर्छ भनेका छन् । साथीहरुसँगै चलचित्र हेर्दा त उनीहरुले मेरो सिन आउदा ताली पड्काएर हल भित्र धेरै रमाइलो गरे । निकै रमाइलो लाग्यो ।
अभिनयको नराम्रो कमेन्ट गर्ने भेटियो कि भेटिएन ?
– त्यस्तो भेटेकी छन् । मलाई चिन्ने जतिले चलचित्र हेरेका छन् । ति सबैले अभिनयको तारिफ नै गरेका छन् । केहीले चलचित्र हेर्न भ्याएको छैन । हेर्छु र कमेन्ट गर्छु भन्नु भएको छ ।
सौदर्य प्रति कतिको सजक हुनुहन्छ ?
–खासै छैन । मलाई प्राय समय मेकअफमा भन्दा पनि नर्मल बस्न मनपर्छ । मेक गर्न पनि मनलाग्दैन । पहिले देखिकै बानी हो यो । धेरै मेकअप गर्न आउँदैन पनि । मेकअप गर्नैपर्दा नर्मल लोसन, क्रिम लगायत लगाउछु ।
एक्सरसाइज कति गर्नु हुन्छ ?
– गर्छु । एक्सरसाइजको लागि कहिकतै जान्न । घरमै एक्सरसाइज गर्छु । घरमा योगा गर्छु । डान्स क्लासहरु लिन्छु ।
फेसनमा कतिको सजक हुनुहन्छ ?
–सजक छु । यसो भन्दैमा निकै एडभान्स होइन । चलेका फेसन लगाउछु । आफुलाई कन्फटेवल पहिरन लगाउन मनपर्छ । सिजन र मौसम हेरेर पहिरन लगाउन मनपर्छ । आफुलाई जिन्स पाइट र टिसर्टमा कम्फटेवल फिल गर्छु ।
–थियटर अभिनयको राम्रो कलाकार बन्ने सपना छ । बिदेशमा गएर पनि थिएटर अभिनयको महत्वपुर्ण कोर्स गर्न मनछ ।
अभिनयको पहिलो कमाई केमा खर्च गर्नु भयो ?
– मैले त्यो पैसा अहिलेसम्म प्रयोग गरेकी छैन । सजाएर राखेको छु ।
–सानोमा गौरी मल्ल मनपथ्र्याे । अर्काे कलाकार निरुता सिंह मनपर्छ ।
जीवन साथीको बारेमा केही सोच्नु भएको छ ?
– त्यस्तो केही सोचेकी छैन । आफुलाई धेरै माया गरोस् । कामको सम्मान गरोस् । यस्तै यस्तै हो नि । हा हा हा ।
– एक्चुल्ली, म सानोमा निकै छुच्ची थिए । स्कुलमा पनि क्लासको क्याप्टेन थिए । केटाहरु त्यति बोल्दैन थिए । त्यस्तै ७,८ कक्षामा होला एक केटाले चिट्टी दियो । प्रेम भरिएको पत्र सहित । चिट्ठी समातेर गालि गरे । टिचरलाई भनिदिए । चिट्ठीमा के लेखेको थियो । त्यो पढिन ।
Give Your Opinion On "प्रेम पत्र समातोर गालि दिए –अभिनेत्री निशा"